Rehefa mieritreritra ny Gresy ianao, dia mety hieritreritra momba ny madio mangalahala tendrombohitra, ny be voninahitra nosy Mediterane ary mazava ho azy ny endri-tsoratra isan-karazany avy amin'ny angano grika. Titan Storm dia slot fa marina ireo rehetra ireo Mitambatra ho iray. Zavatra tsy NextGen slot manana 243 paylines sy fampanantenana mba hanolotra anareo mihoatra noho ny foto-kevitra fotsiny ny mampientam-po. liana? tsara, vakio ny.
NextGen dia lalao teknolojia developer miorina avy any Las Vegas, USA. Efa teo amin'ny raharaham-barotra ny rindrankajy-dalam-pandrosoana nandritra ny fotoana ela izao, ary manana slots ireny horonantsary malaza ireny ho ny bola toy ny Cleopatra, Da Vinci Diamonds slots sns.
About ny Game
Titan Storm dia iray amin'ireo lalao slot izay mahatratra ny tsara ny tena avy hatrany no hametraka ny masonao izany. Izany dia ny hoe tsara tarehy ny mijery! Ny tsara tarehy resahana ny tendrombohitra sy ny nosy ho toerana tonga lafatra ho an'ny reels. Ny reels dia nanarona ny tenany ao amin'ny marika toy ny sabatra mirehitra, karandoha, vehivavy tsara tarehy, ny mipoaka planeta, sns. Rehetra toa tsy avy hatrany avy tany sasany angano grika tantara. Ny lelafon'ny sabatra sy ny planeta mipoaka marika manana ny ambony indrindra vidiny, raha mbola misy ihany koa ny tambin roa marika eo amin'ny endriky ny mariky ny Titan sy ny tempoly mariky. Ny Titan dia ny bibidia kosa ny tempoly dia ny aelezo.
Na ny bibidia sy ny aelezo fanampiana trigger malalaka tombony kofehy ireny manodidina. Eto ianao mahazo 10 maimaim-poana amin'ny alalan'ny toerana misy anao spins. koa, ny bibidia sy ny aelezo mitambatra mba hanao toy ny mpisolo toerana ho an'ny hafa rehetra, ny marika. Ary, Raha tanety misy fandresena amin'ny 5 sariohatra, ny multiplier ny 5x dia ho tonga dia ampiharina ny fandresena. Ny maimaim-poana manodidina spins Azo indray mahatonga ny hipetraka manahaka bebe kokoa.
Titan Storm manana 5 reels ary 243 paylines. Koa satria tsy misy raikitra paylines eto, ny vintana ny hipetraka ny fandresena dia mety hitranga. Ny lalao dia azo nilalao avy tahaka ny tsy toy ny isan-25p namoly ho betsaka araka £ 50 isan-kofehy ireny.
Titan Storm dia iray amin'ireo vitsy slots izay Mitambatra ny zavatra rehetra ilainao ao amin'ny slot lalao ao fotsiny arakaraka ny tsara. Manana foto-kevitra lehibe, mahafinaritra ny sasany fihetsik'ireo sary mihetsika, ary ny sasany tena tsara gameplay. Tsy misy zavatra be sisa mba mangataka, marina?